Global Voices teny Malagasy » Hiverina ao Iran i Hoder · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 05 Novambra 2018 5:13 GMT 1	 · Mpanoratra Rebecca MacKinnon Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Iràna, Mediam-bahoaka, Vaovao Mafana
I miss my country and I am frustrated that I must have fears of going back simply because of the words I have written in my weblogs. (Read Sina Motallebi ‘s account of his three weeks detention because of his blog postings.)
Mahatsiaro ny fireneko aho ary kivy aho fa tsy maintsy matahotra ny hiverina noho ireo teny nosoratako tao amin'ny tranonkalako. (Vakio ny tantaran'i Sina Motallebi  momba ny fitanana azy telo herinandro noho ny famoahany ny blaoginy.)
Hibilaogy i Hossein, hanao fandraketam-peo ary haka sary mandritra ny diany. Ny fifidianana filoham-pirenena  amin'ny 17 Jiona no tena ifantohana. Mangataka amin'ireo mpamaky azy izy mba hanohana azy amin'ny alàlan'ny fampifandraisana ny lahatsoratra bilaoginy avy any Iran sy amin'ny fanomezana vola amin'ny alàlan'ny paypal mba hanampiana amin'ny fanatontosana ny dia
Nitana anjara toerana lehibe tamin'ny famoahana ny tontolon'ny blaogy Persiana i Hossein, ary “bilaogera tetezana (mpampita)” goavana izy. Iray amin'ireo bilaogera nanintona anay mba hanangana ny Global Voices izy. Vakio ity lahatsoratra gazetiboky “Wired” momba azy ity, ary ity lahatsoratra manonona azy sy ireo bilaogera hafa izay nanatrika ny fihaonamben'ny Global Voices tamin'ny volana Desambra lasa teo. Azonao atao ihany koa ny mihaino ny tafatafa niarahana tamin'i Hossein sy ireo bilaogera hafa ao amin'ny Radio Open Source an'i Chris Lydon: ato  sy ity  podcast 20 minitra momba ny fihaonambe nataonay tamin'ny volana Desambra ity.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/11/05/129102/
 Nanambara : http://hoder.com/weblog/archives/014173.shtml
 Sina Motallebi: http://www.ojr.org/ojr/glaser/1073610866.php
 fifidianana filoham-pirenena: http://www.iht.com/articles/2005/06/09/news/journal.php
 ity lahatsoratra gazetiboky “Wired” : http://wired-vig.wired.com/wired/archive/13.06/posts.html?pg=6
 ity lahatsoratra : http://www.personaldemocracy.com/node/208